Ka caawinta rabshadaha telefoonka ee haweenka
365 maalmood oo sannadkii ah, oo la heli karo saacad kasta: Telefoonka caawinta "Rabshadaha ka dhanka ah Haweenka" waa adeeggii ugu horreeyey oo wadatashi ah oo loogu talagalay haweenka ay saameeyeen rabshadaha. Marka la eego lambarka 08000 116 016 iyo la-talinta internetka, dadka ay saameysey, laakiin sidoo kale qaraabada, asxaabta iyo xirfadlayaasha waxay heli karaan talo-bixin qarsoodi ah oo bilaash ah. La taliyeyaasha takhasuska leh ayaa heli doona dadka soo wacaya si aan qarsoodi lahayn, haddii loo codsado, waxay siin doonaan adeegyada taageerada goobta. Hadday lagama maarmaan noqoto, turjubaano ku jira 15 luqadood ayaa ku biiri doona wadahadalka.
Dumarka Talosiinta EN
Talo-siinta Dumarka EN waxay bixisaa talo gaar ah oo ku saabsan rabshadaha ka dhanka ah dumarka :
Xaaladaha qalalaasaha xun (tusaale ahaan maskax dareenka maskaxda, xaaladaha nolosha adag, dhibaatooyinka shakhsi ahaaneed)
rabshadaha qoyska; Rabshadaha galmada
su'aalaha ku saabsan kala-guurka iyo furitaanka
talo-bixinta bulshada / amniga asaasiga ah
su'aalaha ku saabsan daryeelka waalidnimada iyo helitaanka
talo-siinta haweenka haweenka dumarka ah (tusaale ahaan, soocista, takoorida goobta shaqada)
taageerida aasaasida koox is-caawiye, iyo u isticmaalka xarumaha ee ujeeddadan.
Waxaad leedahay lammaane (walaalka, aabaha, wiilka, lammaanaha, qolka wada degan, iwm.) Kuwaas oo gacan kahadal u geeystay ama ku hanjabay adiguna aad jeclaan lahayd inaad taageerto.
Waxay rabaan inay naftooda (iyo carruurtooda) ka ilaaliyaan rabshad dheeraad ah!
booliisku dhawaan ayay idinla socdeen adiga iyo lammaanahaaga ayaa guriga ka eryey ka dib markii uu dhacay ficilo rabshado ah oo mamnuucay in uu soo laabto.
lammaanahaagu kuuma gaysto xoog-muquunis jidhka ah, laakiin wuxuu kugula hadlaa ama kuugu hanjabaa hadal xun, ama aad u maser badan yahay oo wuxuu doonayaa inuu go'aan ka gaaro cida kula kulmi karta iyo kuwa aan la joogin, ama aad dareensan tahay inuu isku dayayo inuu ku xakameeyo.
laguu hanjabay oo laguu soo diray argagixiso telefoon, cadaadis, oo lagugu maqan yahay "dabagal"?
Talada taleefanka: Talaado iyo Khamiis 09:30 - 13:00 saacadood La talinta shakhsiga ee ballanta
Xarunta La-talinta ee familia
Ururka Pro familia waxay kaala talineysaa meelaha soo socda:
la-talinta daryeelka hooyada
la talinta dhalmada
Talo-siinta dhibaatooyinka uurka
sharciga bulshada iyo qoyska
Isniinta - Jimce: 08:00 - 12:00 iyo Isniinta iyo Arbacada galabnimo: 15:00 - 18:00
La talinta telefoonka ee dhalinyarada: Arbaco 14:00 - 15:00 saac
Talada Caritas Uurka
La talinta uurka ee Caritas wuxuu ka caawiyaa arrimaha soo socda:
macluumaadka, la-talinta iyo taageerada ka hor, inta lagu jiro iyo ka dib uurka iyo dhalashada illaa cunuga 3-da sano
khilaafaadka la-talinta iyada oo aan la siin shahaadada la-talinta
la-talinta guud iyo hababka taageerada
iska-wax-u-qabashada kiisaska iyo xiriirinta
caawimaad iyo taageero Caawinaad ku saabsan hirgelinta sheegashooyinka
la-talinta arrimaha bulshada iyo la-socoshada
Iskuday ka dib joojinta uurka
talooyin joogto ah oo ku saabsan kheyraadka iyo qorsheynta nolosha oo ay ka mid yihiin fursadaha shaqo ee mustaqbalka.
1-da Khamiis iyo 3-da Khamiista ee bisha laga bilaabo 10:00 ilaa 16:00